Vary misy saosy tofu sy piquillo | Bezzia
Vary miaraka amin'ny saosy tofu sy piquillo
Maria vazquez | | paty
Ny vary miaraka amin'ny saosy tofu sy piquillo izay arosonay anio dia mampionona amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona. Izany koa dia, fomba fahandro vegan izay azon'ny rehetra ankafizina satria tsy misy vokatra niavian'ny biby. Alternative, araka izany, mety ho an'ny fianakaviana iray manontolo, tsy manaiky ve ianao?
Nanomana ny fomba fahandro izahay miaraka amin'ny vary volontany, Araka ny fantatrao dia mila fotoana bebe kokoa ny fiomanana noho ny vary fotsy. Saingy tsy tokony hisy olana izany. Mandritra ny fandrahoana ny vary dia azonao atao ny manomana ny ambin-tsakafo ao anatin'ity fomba fahandro ity: ny saosy legioma ary saosy piquillo.
Ny saosy piquillo no lakilen'ity vary ity. Tsy vitan'ny hoe manampy loko amin'ny lovia izy io, fa misy tsiro be koa. Ny toro-hevitra omenay dia ny hisafidiananao sakay tsara hanomanana saosy ary araraotinao ny ambiny hanomanana ireo dipoavatra voaroba tortilla.
Vary volontany 1 vera
Lasopy legioma 3 vera
200 g. tofu, diced
Karizy 1 sotrokely
1/2 sotro ny komina
Dipoavatra 3 piquillo
Masirasira ara-tsakafo 1 sotro
Andrahoy ny vary miaraka amin'ny vera legioma 2,5 vera manaraka ny torolalan'ny mpanamboatra. Vantany vao vita dia velomy ary tahirizo.
Afangaro amin'ny menaka oliva ary amin'ny lapoaly sosy ny tongolo sy ny karaoty mandritra ny 10 minitra.
Avy eo, Ampidiro ny tofu, ny kari, ny komina, ny vanim-potoana ary ny volontany mandritra ny minitra vitsy eo am-panomanana ny saosy.
Para amboary ny saosy piquillo Afangaroy ny dipoavatra sy ny masirasira mahavelona amin'ny ron-kena antsasaky ny vera.
Afangaroy saosy amin'ny lapoaly ary andrahoy mandritra ny roa minitra.
Hamita ampio ny vary dia afangaro.
Aroso miaraka amin'ny tofu sy saosy piquillo mafana ny vary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » paty » Vary miaraka amin'ny saosy tofu sy piquillo
Matahotra ny tsy hanana sarontava: Ahoana ny fomba hiatrehana azy
Torohevitra momba ny fisongadinana an-trano ao an-trano